U-Huafu Nylon-Pioneer woMenzi wenqwelomoya osetiweyo
Njengase China umenzi wobuchwephesha weemveliso zenayiloni, uHuafu ubandakanyeka ekuveliseni iipleyile ezahlukeneyo zenayiloni kunye neenxalenye ngakumbi kwiimveliso zenylon ezenziwe ngokwezifiso, besizama konke okusemandleni ethu ukubonelela ngezisombululo kwiimfuno ezahlukeneyo zobuchwephesha zabathengi. Inkampani Dorman Technology Inc.
Ugcina njani iivili zenayiloni yonke imihla?
Iayiloni yevili kunye neebheringi ezijikelezayo ezijikelezayo zineoyile kwaye zithanjisiwe; emva kofakelo, iiasi asi kunye / okanye izikhonkwane zeziko lolawulo oluhlengahlengiswayo ziyaqiniswa. Zonke izinto zokucoca ezisetyenzisiweyo akufuneki ziqulathe izinto ezonakalisayo kunye nokusila. Umthengi unoxanduva lolondolozo olufanelekileyo kunye ...
Faka isicelo seenxalenye zeNylon
Ngophuhliso loqoqosho lwehlabathi kumashumi eminyaka akutshanje, ibango leemveliso zenylon lenyuke kakhulu. Njengezinto ezingenakubuyiselwa kwiimveliso zeplastiki, iimveliso zenayiloni zisetyenziswe ngokubanzi kwicandelo lobunjineli ngenxa yeenzuzo zabo ezizodwa. Inayiloni (i-polycaprolactam) ibe ...
Njengento ebalulekileyo kwicandelo leeplastiki zobunjineli, iimveliso zenayiloni ngoku zisetyenziswa ngokubanzi koomatshini, iimoto, izixhobo zombane, kunye nakumashishini onxibelelwano. Apha, sazisa iingenelo zepulley yenylon: 1. Amandla oomatshini aphezulu; ukuhlala ixesha elide; uqine elungileyo kunye nekhomputha ...